प्रदेश २ का आठ जिल्लामा एक वर्षमा ८ सय १३ जनाको आत्महत्या
पत्र पत्रिका प्रकाशित: २०७७-४-२५ गते १०७५ पटक हेरिएको
गत साता आइसोलेसनबाट फर्केका एकजना युवाले आत्महत्या गरे। धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नं. २ पुरन्दाहाका ३५ वर्षीय युवा विशेश्वर यादवले साउन १६ गते आइसोलेसनबाट घर फर्केपछि आत्महत्या गरेका थिए।
आइसोलेसनबाट फर्केपछि आफ्नै घर परिवार समाजबाट तिरस्कृत भएपछि उनले आत्महत्या रोजे। उनमा कोरोनाको कुनै लक्षण नदेखिएपछि सरकारको मापदण्ड अनुसार घर पठाइएको थियो तर घर जाँदा उनलाई घरभन्दा बाहिर नै राखेर पातमा खाना दिने गरिन्थ्यो र कोही उनको नजिक जान नचाहेपछि उनले अन्तमा आत्महत्या गरे।
त्यस्तै पञ्चायतको दबाब सहन नसकेर सिरहामा एकजनाले आत्महत्या गरेका थिए। गत असार ११ गते सिरहाको लहान नगरपालिका वडा नं. २४ का श्यामलाल राम गोबिन्दपुर–झुटकी जाने बाटोको बीचमा पर्ने सरे खोलास्थित आँपको रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिए। कारण थियो– उनले आफ्नो छोरीको विवाह तय गरेका थिए र दाइजोसमेत बुझाइसकेका थिए, तर उनकी छोरी अर्कै केटासँग प्रेममा रहेकोले आफ्नो प्रेमीसँग भागिन्।
छोरी अर्कै केटासँग भागेकै कारण गाउँका मुखियाहरुले श्यामलाललाई जरिवाना गराए। जरिवानामा उनलाई ६० हजार रुपैयाँ तिर्न लगाइएको थियो। श्यामलालले विवाह तय गरेको पक्षबाट पहिलो छोरी भागे पनि दोस्रो छोरीसँग विवाह गर्न तयार रहेको प्रस्ताव दिएपछि श्यामलालले आफ्नो जातका अगुवाहरुलाई सो कुरा सुनाएका थिए। तर अगुवाहरुले ६० हजार जरिवाना नतिरेसम्म दोस्रो छोरीको विवाह हुन नदिने अडान लिएपछि श्यामलालले बाध्य भएर आत्महत्या गरे।
यस्ता घटना प्रदेश २ मा बढ्दै गएको छ। २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका अनुसार यस प्रदेशमा प्रत्येक दिन दुई जना बढी व्यक्ति विभिन्न कारणवस आत्महत्या गर्दै आएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्र यस प्रदेशमा ८ सय १३ जनाले आत्महत्या गरेको २ नम्बर प्रदेश प्रहरीका प्रमुख डिआईजी धिरज प्रताप सिंहले जानकारी दिए।
आत्महत्या गर्नेहरुमा पनि अधिकांशले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका छन्। यस प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८ सय १३ जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने त्यसमा ६ सय ९ जना झुण्डिएर आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ। प्रत्येक वर्ष आत्महत्या गर्नेको संख्यामा बृद्धि हुँदै गएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
यसभन्दा पहिले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७ सय १७ जनाले आत्महत्या गरेका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ६ सय ३६ जनाले आत्महत्या गरेका थिए। आत्महत्या गर्नेमा अधिकांश युवा छन्।युवाहरु शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रुपले परिपक्क भएपनि परिवारभित्र उनीहरुको भावनाको सम्मान नहुँदा उनीहरुले आत्महत्यासम्मको बाटो रोज्न बाध्य हुने गरेको मनोविज्ञानका जानकार एवं क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका अधिकृत उमेशलाल कर्ण बताउँछन्।
समाज विकासको बाटोमा अगाडी बढेपनि मधेशको रहनसहन, संस्कृतिले गर्दा आजका युवाहरु आफुलाई कुनै दायराभित्र कैद गरेर राखिएको महशुस गर्ने गरेको उनले बताए। यसका लागि किशोरावस्थामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै घरपरिवारका सदस्यदेखि लिएर विद्यालयका शिक्षकसम्मले उनीहरुसँग परामर्शको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा कर्णले जोड दिए।
कर्णका अनुसार पुरुषको तुलनामा महिलाहरु बढी आत्महत्या गर्नुको प्रमुख कारण चरम उत्पीडनको सामना गर्नुपर्ने, बिहेपछि उनीहरुले राखेका इच्छा अपेक्षाहरु पूरा नहुनु लगायतका रहेका छन्।महिलाहरुलाई आफन्तबाटै यौन शोषणको पिडा भोग्नु पर्ने, पतिबाटै पनि यौनदासी जस्तो व्यवहार गरिनु, विद्यालय, सार्वजनिक स्थलमा यौन शोषणका घटनाका कारणले गर्दा पनि उनीहरु आत्महत्याको बाटो अपनाउन बाध्य हुने गरेको उनको भनाइ छ। सार्वजनिक स्थल, घरपरिवार, विद्यालय समेतमा असुरक्षित रहेको त्यसमा पनि उनीहरुलाई सम्झाउने बुझाउने कार्य कहीँ कतैबाट नभएकाले पनि उनीहरु उक्त बाटो अपनाउने गरेको उनले बताए।
यसका लागि घरपरिवारदेखि विद्यालयसम्मले एक जिम्मेवार अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने कर्णको सुझाव छ।प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी सिरहामा १४३ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। सिरहापछि धनुषामा १ सय २९, बारामा १ सय २८, सप्तरीमा ९६, पर्सामा ९५, रौतहटमा ८१, महोत्तरीमा ७६ र सर्लाहीमा ६५ जनाले आत्महत्या गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ।